Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) - 2Game
Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle)
တိုက်ပွဲ: သင်၏အသိအကျွမ်းအောင်ကျေနပ်, ငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း, Project မှမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုပါ။
Project မှ: တိုက်ပွဲ (Alpha စမ်းသပ်ခြင်း) တစ်ဦး sandbox ‘ယှဉ်ပြိုင်မှုကမိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောရှင်သန်မှုအရေးယူမှု, ပြင်းစွာသောအ gunfights မြန်ဆန်-ပွေးညီအဆောက်အဦ, နည်းဗျူဟာပြောက်ကျားများနှင့်တူးဖော်ရေးအဖြစ်အများအပြား element တွေကိုပေါင်းစပ်။ ဒါဟာလုံးဝသစ်ကိုဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကွမ်တမ် virtual world – ဒီဂိမ်းဘယ်မှာစိတ်ဆဲလ်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်, ဒါဝေးလံမဟုတ်အနာဂတ်၌ရာအရပ်ကိုကြာ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အခြားရှုထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီကမ္ဘာသစ်မှာ, တရားမျှတမှုနှင့်မကောင်းသောအ, ရှေးရိုးစွဲနဲ့အစွန်းရောက်အကြားဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးဖြစ်ပွားခဲ့သိရသည်။ သငျသညျအရာလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်နည်း
အဆိုပါကွမ်တမ်ကို virtual ကမ်ဘာပျေါတှငျသငျသညျတရားမျှတမှုနှင့်အမိန့်ကိုကိုယ်စားပြုသူ Wanderers ကောငျးကငျ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အမှတ် 1 ဆိုက်ဘာမုဆိုးသူသည်သုည, ဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါလတ်ဆတ်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း, ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး interwoven ပုံပြင်များသို့ခုန်။
ဒီကမ္ဘာသစ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းများပကတိစူပါပါဝါအမျိုးမျိုးအဆောက်အဦသို့ Quantum Cube စွမ်းအင် manipulate နိုင်စွမ်းဝင်စား။ ရန်သူများကိုအေးခဲဖို့ထောင်ချောက်ကို set up ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်နည်းဗျူဟာအားသာချက်များကို 12 မီတာမြင့်မားသောကင်းမျှော်, ဖန်တီး, သင်၏ရန်သူဘယ်မှာနှင့်ပိုပြီး detect လုပ်ဖို့ရေဒါဖောက်လုပ်။ အရာအားလုံးသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်တမ် Cube စွမ်းအင်ကိုအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုရေခဲသေတ္တာ, လမ်းမီးခွက်, ခြံစည်းရိုး, အဖြစ်စစ်မြေပြင်တွင်တွေ့အမျိုးမျိုးသောတ္ထု, ဖြိုအားဖြင့်ကွမ်တမ်ကို virtual ကမ်ဘာပျေါတှငျရယူနိုငျပါသညျ
တိုက်ပွဲသင်တစ်ဦးလုံးဝအတွေ့အကြုံသစ်ကိုဆောင် ခဲ့. နိုင်သည်ငါစီမံကိန်းကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။ က alpha စမ်းသပ်အဆင့်တွင်လက်ရှိဖြစ်သကဲ့သို့မည်သို့ပင်ဆို, ဂိမ်းစုံလင်သောအနေဖြင့်ယခုအချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီက virtual world ရှာဖွေစူးစမ်းနေချိန်မှာသင်ကဂိမ်းကာလအတွင်းသို့မဟုတ်သင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါကယင်းသို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကျအဖြစ်, မည်သည့်ပြဿနာမျှကြုံတွေ့ရလျှင်ငါ့ကိုသိစေပါ။ သင်ကဒီဂိမ်းအတွက်တုံ့ပြန်ချက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အသင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအလွန်သင့်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားတယ်။ ဂိမ်းအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ငါသည်ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်နဲ့ဂိမ်း supporting အဘို့သင်တို့ဆီသို့နောက်တဖန်ငါ၏အ sincerest ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/Project-Battle-2087166924895033
YouTube ကို: https://www.youtube.com/channel/UCcvgW2P4dDWFAHRbnmyEkFQ?view_as=subscriber
Instagram ကို: https://www.instagram.com/ProjectBattle_Official
Android အတွက် Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် Project မှ: တိုက်ပွဲ (Project : Battle) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!